Amandla nobuthakathaka kucebo lokumaketha online | Izindaba ze-ECommerce
Amandla nobuthakathaka kucebo lokumaketha online
Ukuze uphumelele nge isu lokukhangisa online kuyadingeka ukuthi ubheke ukuthi kanjani amandla nobuthakathaka bebhizinisi lakho zizothinta ngqo ukumaketha kwakho.
Ngalokhu kubalulekile ukuthi wenze a ukuhlaziywa okuthembekile nokunzima, ukufuna amandla nobuthakathaka, kanye nezinsongo namathuba.
1 Yini amandla nobuthakathaka
1.1 Yini amandla
1.2 Buyini ubuthakathaka
2 Ucwaningo lwe-SWOT: kungani kubaluleke kangaka
3 Ungasenza kanjani isifundo se-SWOT kucebo lokumaketha online
3.1 Yazi izici zakho zangaphakathi
3.2 Yazi izici zakho zangaphandle
3.3 Thuthukisa isu lakho lokumaketha online ukuthuthukisa izinzuzo ze-eCommerce yakho
4 Yimaphi amandla nobuthakathaka bebhizinisi lakho le-Ecommerce?
5 Isu Lokumaketha Eliku-inthanethi: Kuthiwani Ngamathuba Nezinsongo?
Yini amandla nobuthakathaka
Okokuqala, udinga ukwazi kahle ukuthi sisho ukuthini amandla nobuthakathaka ku-eCommerce. Futhi lawa magama ahlobene kakhulu neSifundo se-SWOT futhi ngasikhathi sinye akunikeza umbono womhlaba jikelele wesimo sebhizinisi lakho eliku-inthanethi. Eqinisweni, ukuhlaziywa kwamandla nobuthakathaka bebhizinisi (kungaba ku-inthanethi noma ngokomzimba) kungakusiza ukuthi uthuthukise lezo zici lapho "wona" khona futhi uthuthukise lezo ezikwehlukanisa nomncintiswano wakho.
Ngakho-ke, ukwazi ngayinye yazo kuzokusiza ukunquma izici ezahlukahlukene ze-eCommerce yakho.
Singachaza amandla njengoba lawo makhono umuntu anawo, noma ibhizinisi, elenza ligqame. Ngamanye amagama, bamele umehluko omuhle kwabanye abantu noma amabhizinisi. Kulokhu, singasho ukuthi yizici zebhizinisi ezinhle, ezihlonzayo nezingafani.
Isibonelo, cabanga ukuthi usethe isitolo samathoyizi online. Futhi kwenzeka kuwe ukubeka isigaba lapho kuvezwa khona isithombe futhi bangeze amathoyizi abafuna. Ngaphezu kwalokho, unikeza ithuba lokusebenzisa i-3D ukuze lelo gumbi likhonjiswe endlini futhi lihlanganyele namathoyizi. Lokho kungamandla ebhizinisi lakho, ngoba udala okuthile okungekho muntu onakho, ngakho-ke kuyisici esibalulekile ukugqamisa isu lokumaketha.
Ake sikhulume ngobuthakathaka. Ngokungafani nabangaphambilini, ubuthakathaka yibo izici ezivimbela noma ezivimbela ukuthuthukiswa okufanele kwecebo lakho lebhizinisi. Ngamanye amagama, sikhuluma ngalezo zinto ezizokulimaza nokuthi udinga ukuzibhekela ukuze uthuthukise i-eCommerce yakho.
Ukukunikeza isibonelo, ngesitolo esifanayo samathoyizi, ubuthakathaka kungaba ubukhulu bakho. Impela, kunabancintisana abaningi asebekade besemkhakheni isikhathi eside, futhi lokho kusho ukuthi banamakhasimende athembekile noma isisekelo samakhasimende esinqunyiwe. Ngakolunye uhlangothi, hhayi wena. Ngakho-ke, sikhuluma ngobuthakathaka, into okufanele uyithuthukise futhi ngasikhathi sinye ukungalungi okuqhathaniswa nomncintiswano wakho.
Ucwaningo lwe-SWOT: kungani kubaluleke kangaka
Ukuhlaziya amandla nobuthakathaka be-eCommerce kubandakanya ukwenza ukuhlaziywa kwangaphakathi kwebhizinisi lakho. Ngamanye amagama, kungaba ukulungiselela ingxenye yokuqala yokuhlaziywa kwe-SWOT. Kepha kuyini ukuhlaziywa kwe-SWOT?
I-Las Ama-SWOT acronyms abhekisa ebuthakathaka, izinsongo, amandla namathuba. Kunguhlaziyo olwenziwa ngokususelwa ezicini zangaphakathi (Ubuthakathaka Namandla) nangaphandle (Amathuba kanye Nezinsongo).
Lo mbhalo ubaluleke kakhulu ukukwazi ukuhlaziya ukuthi siyini isimo samanje se-eCommerce yakho futhi ngaleyo ndlela ukwazi ukuthatha izinqumo ezifanele nezingaguquguquki nebhizinisi lakho. Ngabe ihlobene ngani necebo lokumaketha online? Okuningi kwe.
Ngokuqondile, kusu lokuthengisa online, Awudingi nje kuphela ukwazi lezo zinto ezikwenza ugqame kulabo oqhudelana nabo, kepha futhi udinga ukuzazi. Kungakho ukuthola okuhle nokubi kwebhizinisi lakho kubaluleke kakhulu, ngoba ngale ndlela ungakhuthaza isu elisuselwa emandleni alo ngenkathi usebenza ukuguqula labo buthakathaka babe amandla (noma, okungenani, ukubenza banyamalale futhi bangabi isici esingesihle se-eCommerce yakho).
Ngithole kanjanivukwenza isifundo se-SWOT ngecebo lokumaketha online
Manje njengoba wazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukwazi Amandla nobuthakathaka, kanye nezinsongo namathuba, umbuzo olandelayo ongazibuza wona maqondana nokukwenza. Lokho wukuthi, ukwenza kanjani ukuhlaziywa kwe-SWOT kucebo lokumaketha online le-eCommerce?
Ukuhlaziywa kwe-SWOT kucishe kumelwe ku-2 × 2 matrix, noma etafuleni elingu-2,2, ngendlela yokuthi ukuhlaziywa kwangaphakathi nangaphandle kuqoqwe, futhi imiqondo emine ihlobene ngendlela yokuthi i-matrix ibe njalo:
Ubuthakathaka - Izinsongo
Amandla - Amathuba
Ngale ndlela, i Ikholomu yokuqala izohambisana nokuhlaziywa kwangaphakathi, ngenkathi eyesibili izofaka izici zokuhlaziywa kwangaphandle.
Futhi kwenziwa kanjani? Ukulandela lezi zinyathelo:
Yazi izici zakho zangaphakathi
Sikhuluma ngalezo izinto ezingaba amandla nobuthakathaka. Isibonelo:
Kuyinto elula ukuthi wenze uhlu olubanzi lwayo yonke into ehlobene ngaphakathi. Ngemuva kwalokho, kufanele uyihlukanise izigaba ezimbili, amandla nobuthakathaka. Ungawahlukanisa kanjani? Emandleni kufanele ubeke lezo zinto ezikhiqiza inzuzo ngaphezu kwabancintisana nabo.
Isibonelo: umkhiqizo owaziwa kangcono, ukuxhumana kangcono, imikhiqizo ekhangayo, amanani angcono ...
Ngakolunye uhlangothi, uzoba nobuthakathaka. Lezi yizo ezizokwenza ungancintisani kangako, njengokuthi: ukungabi nalwazi, izinkinga zangaphakathi, izakhiwo ezindala, ukungabi nasikhundla ku-eCommerce, ukungabi namanethiwekhi okuxhumana nabantu ...
Yazi izici zakho zangaphandle
Njengakwezici zangaphakathi, kuyadingeka ukwenziwa nezangaphandle, kepha njalo ngokuya ngeqiniso lokuthi umncintiswano uku-inthanethi, ngoba sikhuluma nge-eCommerce.
Kulokhu, izinto ezinjengabahlinzeki, abasabalalisi, izinto zezomnotho, izinguquko ekuziphatheni kwamakhasimende, izimbangi ezindala… zinganquma amathuba akho nezinsongo zakho.
Thuthukisa isu lakho lokumaketha online ukuthuthukisa izinzuzo ze-eCommerce yakho
Manje njengoba usuzazi zonke izinto ezingaba nomthelela ekuqhubekeni kwe-eCommerce yakho, sekuyisikhathi sokwakha isu lokumaketha eliku-inthanethi eligxile ekuzuzeni ku-Strengths nakuThuba lakho, ngasikhathi sinye lapho uguqula ubuthakathaka bube into enhle, futhi ubanqande Izinsongo
Isibonelo, ake ucabange ukuthi ubuthakathaka abukho ukuxhumana nomphakathi. Isu lokumaketha eliku-inthanethi kungaba ukudala lawa manethiwekhi futhi ubanikeze "ubuntu" bohlobo, okungukuthi, ubanikeze impilo futhi ugcine ukuxhumana nabasebenzisi abangaba nentshisekelo kumkhiqizo noma ebhizinisini lakho.
Okulandelayo, nangendlela ebonakalayo, uzokwazi ukwazi ukuthi imaphi amandla, ubuthakathaka, amathuba nezinsongo zebhizinisi le-eCommerce. Ngakho-ke, uzokwazi ukubona umphumela ongawuthola ngokuhlaziywa kwe-SWOT.
Yimaphi amandla nobuthakathaka bebhizinisi lakho le-Ecommerce?
Uma kukhulunywa nge isu lokukhangisa onlineKungumqondo omuhle ukwenza ucwaningo lwemakethe kumakhasimende akho amanje. Lokhu kuzokusiza wakhe umbono oqotho ngokwengeziwe ngedumela lakho njengenkampani emakethe.
Ezinye izibonelo zamandla zingafaka:
Insizakalo yamakhasimende yomuntu siqu futhi eguquguqukayo
Izici ezikhethekile eziningi noma izinzuzo ezinikezwa yimikhiqizo yakho
Unolwazi oluthuthukile noma olukhethekile
Ukungabi nezinsizakusebenza ezidingekayo zezezimali
Ukungabi nedumela elihle emakethe
Yiba nezinhlelo zokubalwa kwemali ezingasebenzi kahle
Isu Lokumaketha Eliku-inthanethi: Kuthiwani Ngamathuba Nezinsongo?
Kulokhu isu lokumaketha online lamabhizinisi e-Ecommerce Kubalulekile futhi ukufaka womabili amathuba nezinsongo. Ngalo mqondo sine:
Khulisa ukufunwa kwengxenye ethile yemakethe
Sebenzisa i-Intanethi ukufinyelela ezimakethe ezintsha
Ukusetshenziswa kobuchwepheshe obuthuthukisa ikhwalithi yemikhiqizo
Ukuvela kwabancintisana abasha
Izinhlobo ezingcono, ezikhangayo noma eziyinkimbinkimbi, noma ezingabizi kakhulu zomkhiqizo onikezwayo
Imithetho emisha enyusa izindleko
Ukwehla komnotho okwehlisa ukufunwa komhlaba jikelele
Kunoma ikuphi, uma usuqede lokhu kuhlaziywa, ungalinganisa imiphumela engaba khona yento ngayinye ukwakha isu lakho lokumaketha online. Uma ucabanga ngazo zonke lezi zici, maningi amathuba okuthi kwakhiwe isu lokumaketha online ngokuhambisana nezidingo zamanje kanye namathuba amakhulu okuphumelela.
Kungani isu lokumaketha ledijithali libaluleke kangaka?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-ECommerce » Marketing » Ukuthengisa oku-intanethi » Amandla nobuthakathaka kucebo lokumaketha online
Kungenzeka ukusetha i-ecommerce emahoreni angama-24? Izinyathelo ezidingekayo zokukufeza
Yini okuholayo ekukhangiseni nokuthi ungakukhiqiza kanjani